Ergayga Mareykanka ee Geeska Afrika oo is-casilaya | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Ergayga Mareykanka ee Geeska Afrika oo is-casilaya
Washington (Dalkaan.com) – Ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa bishan xilka ka tagaya, kadib muddo 9 bilood ah oo uu xilkaasi hayay, waxaana xilkaas la wareegaya David Satterfield oo ah safiirka Maraykanka u fadhiya Turkiga, sida ay qortay wadaaladda wararka Reuters.
Feltman, oo ah diblomaasi ruug-cadaa ah ayaa xilka la wareegay bishii April, waxuuna si degdeg ah ula kulmay laba xasarood oo waaweyn oo kala ahaa dagaal sokeeye ee ka socda Itoobiya oo u dhexeeya ciidamada Jabhadda Xoraynta Shacabka Tigray (TPLF) iyo ciidanka federaalka ee Ra’iisal-wasaare Abiy Axmed iyo sidoo kale afgambi militari oo ka dhacay dalka Suudaan, bishii Oktoobar.
Feltman, oo 62 jir ah, ayaa sheegay in “dareenkiisa xilkasnimo” uu siinayo inuu ka fariisto shaqada diblomaasiyadeed, isla markaana uu noqdo howlgab, kadib in ka badan 25 sano oo uu ahaa diblumaasi Maraykan ah oo ka shaqeeyay Qaramada Midoobay, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
Satterfield, oo ah ruug-caddaa ka tirsan Arrimaha Dibadda Maraykanka oo leh in ka badan afartan sano oo waayo-aragnimo ah, ayaa soo maray jago adag oo ah safiirka Maraykanka ee Turkiga, halkaas oo uu isku hayay xiriirka laba geesoodka ahaa ee u dhexeeya labada dal ee ka wada tirsan xulafada NATO.
Ka hor Ankara, waxa uu ka soo shaqeeyay Saudi Arabia, Lebanon, Tunisia iyo Syria, iyo dalal kale, wuxuuna laba jeer ka soo noqday dublamaasigii ugu sareeyay ee Maraykanka ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Bariga Dhexe oo uu ku sime ka ahaa.
Mareykanka oo war kasoo saaray waqtigii doorashada ee dhacay iyo 3...
Shaqo joojin, duulaan ciidan, hub aruursi iyo xaaladda Muqdisho oo kacsan.
Ergada Dooratay Fahad Yaasiin Waxaa ku jiray dad aan u dhalan...
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola: “Waxaan u Baahanahay Waqti aan ku...
Soomaalida Netherlands oo dooratay guddi cusub